Dowladda Kenya oo ku Guuleysatay Kursi Muhiim u ah Shuruucda Badaha Caalamka
7 months ago allbalcad
Dowladda Kenya oo horay uga mid ahayd golahan ayaa hataan waxaa ay mar kale fursad u heleysaa Dejinta Shuruucda Caalamiga ah ee Badaha oo ay ku dhaqmaan Maraakiibta Dunida.
Doorashada Kenya loogu doortay ka mid ahaanshaha Hay’addani oo maalama ka hor ka dhacday Magaalada London ee Dalka Ingiriiska ayaa waxaa ka qeyb qaatay 174 dal, waxaana Kenya ay ku guuleysatay in markale ay dib uga mid noqoto Golahaasi.
Kenya ayaa hataan ka tirsan qeybta C ee hey’adda IMO oo ay ku wada jiraan 20 dal oo ah kuwa danaha gaarka ah ka leh arrimaha badda, gaar ahaan hagida maraakiibta adeegsada badaha.
Hey’addan ayaa kala leh qeybo kala duwan, waxaana Kenya ay qeybta C ka wada tirsan yihiin dalalk badan oo Afrikaan ah oo ay kamid yihiin dalalka Morocco, Koonfur Africa, Liberia iyo Masar.
“In markale dib la inoo doorto waxay xaqiijineysaa wakiilka aan ka nahay geeska Afrika iyo dalalka harooyinka waaweyn oo ay kmid yihiin Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo, Jabuuti, Eritrea, Itoobiya, Kenya, Rwanda, Soomaaliya, South Sudan, Tanzania iyo Uganda,” ayay tiri Nancy.
Golahan ayaa labadii sanaba mar yeesha shirweyne, waxaana ay isla nidaamiyaan qaabka loo wada shaqeynayo, miisaaniyadda ku baxeysa hey’addaas iyo sidoo kale doorashada 40-ka xubnood ee kamid noqonaya hey’adda.
Previous Guddoomiyaha Gobalka Banaadir oo Magacaabay Guddoomiyayaal Degmo
Next SAWIRRO:- Dibadbaxyo looga soo Horjeedo Maamulka Hirshabeelle oo Saakay Ka Dhacday Degmadda Buulo Burte
Sarkaal ka tirsan Booliska Kenya oo kashifay sir culus oo ku saabsan Weerarkii hotel Dusit (989)